“Kubadda cagta kuma soo laaban doonto siddii ay aheyd ka hor Coronavirus” – Lionel Messi – Gool FM
Dajiye May 31, 2020
(Yurub) 31 Maajo 2020. Kabtanka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Argantina ee Lionel Messi ayaa aaminsan in kubadda cagta aysan noqon doonin sidii ay aheyd kahor inta uusan faafin caabuqa Coronavirus.
Horyaalka La Liga ayaa markale la filayaa in dib loo ciyaari doono 11-ka bisha June ee soo socota, waxaana la filayaa in lasoo gabagabeyn doono 19-ka July, sida uu xaqiijiyey madaxweynaha La Liga ee Javier Tebas.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Lionel Messi waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Kubadda cagta ma la mid noqon doonto sidii ay ahaan jirtay wixii ka horreeyay caabuqa Coronavirus, kaasoo abuuray jahwareer aad u weyn, iyadoo la arkay dad badan oo waayay qoysaskooda iyo asxaabtooda”.
“Ma jirto wax ka xun inaad weyso kuwa aad jeceshahay, oo xitaa aadan helin fursad aad ku macsalaameyso iyaga”.
“Kulligeen waxaan shaki ka qabnaa xaaladda adduunka kaddib dhammaadka dhibaatooyinka caabuqa Coronavirus, iyo wixii dhacay oo dhan, dadka qaar waxay soo mareen xilliyo aad u adag, halka kuwo kalena ay u saameysay xaaladda siyaabo kale duwan”.
“Waxaan u maleynayaa in caabuqa Coronavirus uu abuuray waxyaabo badan oo xun, laakiin ma jiraan wax ka xun inaad weyso kuwo aad jeceshahay”.
“kubbadda cagta ma noqon doonto sidii ay ahayd dhibaatada ka hor, nolosha oo dhan ma noqon doonto sidii ay horey u aheyd”.